Mogadishu Journal » Xan ayaa leh: De Gea inuu ka tagi doono United
Mustaqbalka David de Gea ee kooxda Manchester United ayaa ahaa mid si aad ah loo hadal hayay bilooyin.
Xaaladda ayaa noqotay mid mugdi gashay toddobaadyadii u dambeeyay xilligii uu Isbaanishka fasaxa aabbanimada ku jiray laakiin De Gea ayaa ku soo laabtay England wuxuuna u ciyaarayaa safka labaad Dean Henderson
De Gea ayaa ku sugnaa Old Trafford tan iyo sanadkii 2011 laakiin tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa ku soo bilaabay Henderson 7 kulan oo xiriir ah.
DUGSIGA DUWAN - DE GEA inuu ka baxo UNITED
Wakiilada De Gea ayaa durbaba ka dhawaajinaya kooxaha doonaya inay iibsadaan, waxaana lagu wadaa inuu ka tago Manchester United xilli ciyaareedkan, sida ay qortay Daily Mail.
30 jirkaan ayaa qandaraas kula jira Red Devils in kasta oo aan weli la sheegin lacagta lagu iibinayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Real Madrid, Paris Saint-Germain iyo Atletico Madrid ay yihiin kooxo xiiso u qaba.
- ESPN ayaa ku warameysa in Barcelona ay sii wadi doonto baacsiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland laakiin ilo wareed ayaa sheegaya in heshiiska uu noqon doono "mid aad u adag".
- Daafaca Tottenham Juan Foyth ayaa amaah ugu jooga Villarreal xilli ciyaareedkan kooxda reer Spain ayaa dooneysa inay si joogta ah kula soo saxiixato iyadoo ka yar 15.3 milyan ginni oo u dhiganta 13 milyan ginni, sida ay qortay Football Insider.
- Jerome Boateng ayaa ka tagi doona Bayern Munich isagoo xor ah dhamaadka xilli ciyaareedkan iyadoo kooxda ay doorbideyso inaysan u bandhigin qandaraas cusub, sida ay qortay Kicker.
- Sky Sports ayaa sheeganeysa in Zlatan Ibrahimovic uu diyaar u yahay inuu qalinka ku duugo hal sano oo dheeraad ah oo uu kula sii joogo Milan.